ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းမော်ကွန်း - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အဝတ်အစား » categoryFitness ပြန်အမ်းခြင်းဖြင့်မော်ကွန်းတိုက်
နွေရာသီ 2015 ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း Giveaway
နွေရာသီ ၂၀၁၅ Fitness Rebates Giveaway အားကစားကြံ့ခိုင်ရေးအရောင်းအဝယ်အွန်လိုင်းသည်ယခုနွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသစ်သောလက်ဆောင်တစ်ခုလက်ခံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ Teal Fitness Rebates တီရှပ်နှင့် Drawstring အိတ်ကြီးတစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၎င်းတို့၏ဆိုက်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန် (သို့) အနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းအတွက်အောက်တွင်သာရေးပါ။
ဇူလိုင်လ 9, 2015 admin အဝတ်အစား, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, Giveaway, ကို T-Shirt မှတ်ချက်မရှိ
နွေ ဦး ရာသီ 2015 လက်ဆောင်ပေးမယ်: ကြီးမားသောအနက်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ကြံ့ခိုင်ရေး Rebates Hoodie ကိုရယူပါ
နွေ ဦး ရာသီ ၂၀၁၅ တွင်အနက်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုဆုများ Hoodie ကို Rafflecopter မှပေးသောလက်ဆောင်တစ်ခုအောက်တွင်ဤလက်ဆောင်သည် ၅/၁/၁၅ မှ စတင်၍ ၆/၃၀/၁၅/၁၅ ရက်နေ့တွင်အဆုံးသတ်ပါမည်။ EST ဆုရရှိသူတစ် ဦး သည်လက်ဆောင်များကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ FitnessRebates.com Sweepstakes (“ Sweepstakes”) သည်တရားဝင်နေထိုင်သူများအတွက်ဖွင့်ထားပါသည်။
မေလ 1, 2015 admin အဝတ်အစား, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, Giveaway, အင်္ကျီမှခေါင်းစွပ် မှတ်ချက်မရှိ
မေလ 2014 Hoodie Giveaway
မေ 2014 XNUMX ချွေးထွက်အင်္ကျီအသစ်တစ်ခုလိုအပ်နေသည် Hoodie Giveaway? သို့ဆိုလျှင် Fitness Rebates သည်အသစ်သော X-Large ရေတပ်အပြာရောင်ကြံ့ခိုင်ရေး Rebates Hoodie ကို Lucky Winner တစ်ခုသို့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ The Giveaway သည် Punchtab မှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ Facebook Fan Page ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းအပါအ ၀ င် ၀ င်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
မေလ 9, 2014 admin အဝတ်အစား, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, Giveaway, အင်္ကျီမှခေါင်းစွပ် မှတ်ချက်မရှိ
ရရှိနိုင် "ကင်ဆာ Away ချီ" ရင်သားကင်ဆာပွား Gymwear Now ကို
Fitness Rebates သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောရင်သားကင်ဆာအသစ်အကြောင်းကြေငြာခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်။ ကင်ဆာရင်သားကင်ဆာရင်သားကင်ဆာသတိပြုမိခြင်း။ ယခုအသစ်သောတီရှပ်များကို eBay တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်လေလံဆွဲပါသို့မဟုတ်ချက်ချင်း ၀ ယ်ရန် ၀ ယ်ယူရန်ယခုပင်ရွေးစရာကိုသုံးနိုင်သည်။ ၁၀% ...
မေလ 4, 2014 admin အဝတ်အစား, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, ကို T-Shirt3မှတ်ချက်
ဧပြီလ 2014 Gymwear Giveaway:4/ 30 / 14 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိတဲ့ Black နဲ့အပြာရောင်ကို T-Shirt အနိုင်ရမည်ဟု
2014ပြီ ၂၀၁၄ Gပြီလ Gymwear Giveaway အားကစားလေ့ကျင့်မှုများသည်ကံကောင်းခြင်းအနိုင်ရရှိသူအားအသစ်သောတီရှပ်အသစ်တစ်ခုကိုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆု - အနက်ရောင်နှင့်အပြာရောင်ကြံ့ခိုင်မှုပြန်လည်အားဖြည့်လက်ဆောင်အသစ်အမှတ်တံဆိပ် T-Shirt - အရွယ်အစားကြီးမားသောတီရှပ် Hanes မှပြုလုပ်သည်။ ချည် / Polyester ရောနှောခြင်းအခမဲ့ပေးကမ်းခြင်းကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဝင်ရမည်နည်း။ The Giveaway သည် Punchtab မှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ အဲဒီမှာ...
မတ်လ 30, 2014 FitnessRebates အဝတ်အစား, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, Giveaway, ကို T-Shirt မှတ်ချက်မရှိ
2014 /4/ 30 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိမတ်လ / ဧပြီ 14 အပြာရောင်ကို T-Shirt Giveaway
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေ ၂၀၁၄ မတ် / Tပြီလ ၂၀၁၄ T-Shirt Giveaway ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြာရောင် Fitness Rebates T-Shirt အရွယ်အစားအရွယ်အစားကြီးမားသောကံကောင်းသောအောင်မြင်သူတစ် ဦး အတွက်ကြီးမားသောဒီဇိုင်း ၄ ခုပါ ၀ င်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ ဂူဂဲလ် + နှင့်အခြားလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်း / 2014/4 The Fitness Rebates Giveaway ၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မတ်လ 6, 2014 admin အဝတ်အစား, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, Giveaway, ကို T-Shirt 1 မှတ်ချက်
စိန့်ပက်ထရစ်နေ့ $ 1.99 အစိမ်းရောင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေတီရှပ်ရောင်းမည်မတ်လ ၃၀ ရက်အထိဖြစ်သည်
စိန့်ပက်ထရစ်နေ့ $ 1.99 အစိမ်းရောင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေများတီရှပ်ရောင်းမည်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေအစိမ်းရောင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေတီရှပ်များ! ကန့်သတ်ထားသည့်အချိန်အတွက်သာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိမ်းရောင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေများတီရှပ်ကိုဒေါ်လာ ၁.၉၉ ဖြင့်သာရောင်းရန်တင်ထားသည်။ သင်ရွေးလိုသောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော eBay သို့ပို့ခြင်း ...
မတ်လ 1, 2014 FitnessRebates အဝတ်အစား, ကို eBay, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, ကို T-Shirt မှတ်ချက်မရှိ
4.99 / 12 / 13 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိ Black ကကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းသည် T-Shirt သာလျှင် $ 13 Plus အားသင်္ဘော Sz L ကို
အသစ်သောကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေအမှတ်တံဆိပ်တီရှပ်ကြံ့ခိုင်ရေး Rebates အမှတ်တံဆိပ်အသစ်လိုဂိုတီရှပ်ရှိ !! eBay မှဒေါ်လာ ၄.၉၉ ဖြင့်သာကြီးသော Black Fitness Rebates တီရှပ်အရွယ်အစားကြီးကြီးကိုသင်ရနိုင်သည်။ အသစ်စက်စက်ကြံ့ခိုင်မှုပြန်အမ်းငွေတီရှပ်ကို Hanes မှပြုလုပ်သည်။ ရှပ်အင်္ကျီသည်ဤ eBay စာရင်းသည်ချည်မျှင်၊
နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 admin အဝတ်အစား, ကို eBay, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, ကို T-Shirt မှတ်ချက်မရှိ
12.99-10-31 သေးပါဘူး X-အကြီးစားအပြာရောင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း Hoodie သာလျှင် $ 13 သက်တမ်းရှိ
ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီ၊ ယခုတွင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေများသည်ခေါင်းစွပ်နှင့်ပြည့်နေပြီ !!! eBay တွင် X-Large Royal Blue Fitness Rebates Hoodie ကိုသင်ဒေါ်လာ ၁၂.၉၉ ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ တော်ဝင်အပြာရောင်ကြံ့ခိုင်မှုပြန်အမ်းငွေများတင်ပို့ခြင်း Hoodie သည် Lott ၏အကောင်းဆုံးအသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောချည် / Polyester ရောစပ်မှုဖြစ်ပြီးဟယ်လိုဝိန်း ၁၀/၃၁/၁၃ တင်ပို့ခြင်း။ ..
အောက်တိုဘာလ 1, 2013 FitnessRebates အဝတ်အစား, ကို eBay, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, အင်္ကျီမှခေါင်းစွပ် မှတ်ချက်မရှိ
အကြီးစား Black ကကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း Hoodie သာလျှင် $ 14.99 Plus အားသင်္ဘော။ 10 /7/ 13 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိ
ဆောင်းရာသီရောက်လာပြီ၊ ယခုတွင်ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေများသည်ခေါင်းစွပ်နှင့်ပြည့်နေပြီ !!! eBay တွင်အနက်ရောင်ကြံ့ခိုင်မှုပြန်အပိုပစ္စည်း Hoodie ကိုသင်ဒေါ်လာ ၁၄.၉၉ ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှု။ Hoodie သည်လဲမှို့ / Polyester ရောစပ်မှုဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးသောအသီးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၁၀/၇/၁၃ လကုန်တင်ပို့မှုသည်ဒေါ်လာ ၉.၉၉ ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလ 9, 2013 FitnessRebates အဝတ်အစား, ကို eBay, ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း, အင်္ကျီမှခေါင်းစွပ် မှတ်ချက်မရှိ
အခမဲ့ Ebook ဒေါင်းလုပ်: ကျန်သူများအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို Brandon Todd ဖြင့်ပြောင်းပါ
Kelsey Ale ၏ Paleo ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ
အခမဲ့ Keto နံနက်စာချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်
Essential Keto Cookbook ကိုအခမဲ့ရယူပါ
ရင်ဘတ်နှင့်လက်နက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ၄၀ ကျော်
COVID-19: Coronavirus ကာကွယ်နည်း
အရောင်းရဆုံး Paleo အစပြုသူများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်စာအုပ်ကို ၁၀၀% အခမဲ့ရယူပါ။
Weight Loss for Top Salad Dressing ပါဝင်ပစ္စည်းများ
သင်၏အခမဲ့ Keto လက်ငင်း Pot Cookbook ကိုတောင်းဆိုပါ
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Category ေရြးပါ ၁ ပတ်အစားအသောက် (၁) ၁ ပတ်အစားအသောက် (၁) ၂၄ နာရီကြံ့ခိုင်ရေး (၃) A1 ဖြည့်စွက်ချက်များ (5) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (5) Adidas (2) ညှိနိုင်သော Dumbbells (3) အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစာအုပ်ဆိုင် (၃) အမေဇုံ (39) အန်ရီယန် (1) အချိန်မရွေးကြံ့ခိုင်ရေး (1) သဲသောင်ပြင် (11) သောကြာနေ့ (16) ဘလော့ (20) လေ့ကျင့်ခန်းများ (1) သုံးသပ်ချက်များ (1) Bodybuilding.com (2) Bodybuilding.com ယူကေ (1) စာအုပ် (7) ရုက္ခဗေဒရွေးချယ်မှု (2) Taalay (46) ကနေဒါ (5) Treadclimber (17) BPI အားကစား (2) BulkSupplements.com (2) CB-1 ကိုယ်အလေးချိန် (2) Century MMA (1) လိမ္မာပါးနပ်သင်တန်း (4) အဝတ်အထည် (14) ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းငွေ (10) Hoodie (4) တီရှပ် (6) Gold's Gym (1) Cosmobody (1) တီတီနင် (2) ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ (2) နေ့စဉ်မီးလောင်ခြင်း (1) အစားအသောက်တိုက်ရိုက် (1) အစားအသောက်သွား (၂) Drugstore.com (3) ဒူကန်အစားအစာ (1) ဒီဗီဒီ (၁၅) eBay (4) Ebook (21) Ellipticals (8) Freemotion (1) Proform (4) ချောမွေ့ (2) Yowza (1) eSportsOnline (1) လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီး (5) Proform (4) Schwinn (1) ချည်ငင် (2) ဖြောင့်မတ် (1) Facebook (1) တီရှပ်လက်ဆောင်ပေးခြင်း (1) အဆီလောင်စာ (6) အဆီ (1) ဖခင်များနေ့ (1) ပန်းတိုင် (3) ကြံ့ခိုင်ရေးသမ္မတနိုင်ငံ (1) Footaction (3) Footlocker (3) သီးသန့် (40) \_ t ဂါယာ (၃) ဂန်ဒါတောင် (1) Garcinia စုစုပေါင်း (1) Giveaway (17) Groupon (2) အားကစားရုံ Guest ည့်သည်ခွင့်လက်မှတ် (2) မင်္ဂလာအီစတာ (3) HCG အစားအစာ (1) နှလုံးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်သူများ (6) Garmin (2) ပိုလာ (1) timex (2) ကြိုးမဲ့ရင်ဘတ်သိုင်းကြိုး (1) အိမ်များအားကစားရုံများ (2) Horizon ကြံ့ခိုင်ရေး (4) အာဟာရအိမ် (၁) IVL (5) စွမ်းအင်အစိမ်းရောင် (3) Joe's Balance Outlet (၁) K-Mart (1) ကယ်လီ၏အလှကုန်ပစ္စည်း (၂) keto (6) အလုပ်သမားနေ့ (၁) ဘဝကြံ့ခိုင်ရေး (1) မဂ္ဂဇင်းများ (1) အောက်မေ့ရာပွဲနေ့ (၄) မisfit (3) မဟာမဲလှောင်ရုံ (3) ပုံစံများ (2) မိခင်များနေ့ (1) ကြွက်သားနှင့်ခွန်အား (4) NASM (1) လက်ကျန်ငွေအသစ် (4) တက်ကြွမှုအသစ် (1) Nike စတိုး (1) အာဟာရဖြည့်တင်းမှုများ (1) Paleo အစီအစဉ် (2) ခြေထောက်တိုင်း (1) fitbit (1) PersonaLabs (1) အကြိုလေ့ကျင့်ခန်း (12) သမ္မတနေ့ (၁) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သောကူပွန် (3) Proform.com (7) ProHealth (1) Prohormones (၁) အရင်းအမြစ် (၅) ပရိုတိန်း (9) ကြွက်နို့ (3) ပြူရီတန်မာန (၁) အရည်အသွေးကျန်းမာရေး (4) Reebok (8) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (1) လှေလှော်စက်များ (2) Sears (2) Shaker ဖလားများ (1) FitnessRebates.com (1) ဖိနပ်များ (13) Shoes.com (1) Slendertone (1) ချောမွေ့သောကြံ့ခိုင်ရေး (8) တစ်ကိုယ်တည်းကြံ့ခိုင်ရေး (1) South Beach Diet Delivery (1) Spafinder (1) Spartan ပြိုင်ပွဲ (5) အားကစားအာဏာပိုင် (1) Strong Lift ၀ တ်စုံ (၁) ခိုင်ခံ့သောဖြည့်စွက်အရောင်းဆိုင် (၁) စူပါမားကတ်များ (1) ဖြည့်စွက်ချက်များ (34) ဖြည့်စွက်သည့်တိုဂို (၄) Suzanne Somers (1) ချွေးထုတ်ပစ္စည်းများ (1) စုစုပေါင်းအားကစားရုံ (2) ဘီးအစက်များ (16) မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း (1) ကောင်းမှုကုသိုလ် (1) Phoenix (1) Precor (1) Proform (6) Reebok (1) ချောမွေ့ (2) တစ်ကိုယ်တော် (1) ဝိုလို (2) တွစ်တာ (၄) Duffel Bag Giveaway (1) တီရှပ်လက်ဆောင်ပေးခြင်း (3) တုန်ခါမှုစင်တာ (1) ဗွီဒီယိုဂိမ်း (1) အရေးပါသောအရာ (1) VitalMax (1) Vitamin Shoppe (3) Vitamin World (3) Weider (2) လေ့ကျင့်ခန်းများ (2) Workoutz.com (1) ယောဂဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (4) ယောဂညွှန်ကြားချက် (1) Yowza ကြံ့ခိုင်ရေး (1) ဇမ်ဘား (5)
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020 နိုဝင်ဘာလ 2020 စက်တင်ဘာလ 2020 မတ်လ 2020 ဇန်နဝါရီလ 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2019 အောက်တိုဘာလ 2019 သြဂုတ်လ 2019 မတ်လ 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019 ဇန်နဝါရီလ 2019 နိုဝင်ဘာလ 2018 အောက်တိုဘာလ 2018 စက်တင်ဘာလ 2018 သြဂုတ်လ 2018 ဇြန္လ 2018 ဧပြီလ 2018 မတ်လ 2018 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 ဇန်နဝါရီလ 2018 နိုဝင်ဘာလ 2017 အောက်တိုဘာလ 2017 မေလ 2017 ဧပြီလ 2017 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 ဇန်နဝါရီလ 2017 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2016 နိုဝင်ဘာလ 2016 အောက်တိုဘာလ 2016 စက်တင်ဘာလ 2016 ဇူလိုင်လ 2016 ဇြန္လ 2016 မေလ 2016 ဧပြီလ 2016 မတ်လ 2016 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 ဇန်နဝါရီလ 2016 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2015 နိုဝင်ဘာလ 2015 အောက်တိုဘာလ 2015 စက်တင်ဘာလ 2015 သြဂုတ်လ 2015 ဇူလိုင်လ 2015 ဇြန္လ 2015 မေလ 2015 ဧပြီလ 2015 မတ်လ 2015 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015 ဇန်နဝါရီလ 2015 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2014 နိုဝင်ဘာလ 2014 အောက်တိုဘာလ 2014 စက်တင်ဘာလ 2014 သြဂုတ်လ 2014 ဇူလိုင်လ 2014 ဇြန္လ 2014 မေလ 2014 ဧပြီလ 2014 မတ်လ 2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014 ဇန်နဝါရီလ 2014 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2013 နိုဝင်ဘာလ 2013 အောက်တိုဘာလ 2013 စက်တင်ဘာလ 2013 သြဂုတ်လ 2013 ဇူလိုင်လ 2013 ဇြန္လ 2013 မေလ 2013 ဧပြီလ 2013 မတ်လ 2013 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 ဇန်နဝါရီလ 2013
သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွတ်ကီးများ - ဤဆိုဒ်သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း မူပိုင်ခွင့်© 2021 | အကြောင်းအရာ မဂ္ဂဇင်းစတိုင် စွမ်းအားဖြင့် WordPress ↑
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ / Affiliate ထုတ်ဖော်: ဤ website ကို link များကိုရည်ညွှန်းနေဖန်ဆင်းတော်ဝယ်ယူမှုများအတွက်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်းအမေဇုံန်ဆောင်မှုများ LLC Associates မှအစီအစဉ်ဆိုဒ်များကြော်ငြာနှင့် Amazon.com မှချိတ်ဆက်နေဖြင့်ကြော်ငြာစရိတ်ဝင်ငွေမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများများကိုဒီဇိုင်းတစ်ခု Affiliate ကြော်ငြာအစီအစဉ်တွင်တစ်ဦးပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "ကိုကြည့်ပါကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ"ပိုပြီးအင်ဖိုအတွက်စာမျက်နှာ။ ကို Google, Inc တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်မဆိုကြော်ငြာတွေ, နှင့်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတွေဟာ cookies တွေကိုသုံးပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီ cookies တွေကို Google ကသင်၏ဒီ site ကိုမှလာရောက်လည်ပတ်သူနှင့် Google ကြော်ငြာန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အခြေခံကြော်ငြာတွေဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါ။